स्वस्थ रहन दिनमा कति पानी पिउनु राम्रो हुन्छ ? - नेपाल कुरा
स्वस्थ रहन दिनमा कति पानी पिउनु राम्रो हुन्छ ?
प्रकाशित मिति: १६ बैशाख २०७८, बिहीबार April 29, 2021 , संवाददाता: Hina Suwal
काठमाडौं । एउटा स्वस्थ व्यक्तिका लागि २४ घण्टामा लगभग पाँच लिटर पानी आवश्यक पर्दछ ।
एक लिटर पानी छालाबाट पसिना भएर बाहिर निस्कन्छ । एक लिटर पानी दिशा गर्ने बाटो भएर बाहिर जान्छ । यसरी हिसाब गर्दा दिनमा २४ घण्टामा लगभग पाँच लिटर पानी बाहिरिन्छ । यद्धपी वातावरणीय मौसम र व्यक्तिको दैनिक क्रियाकलापले यसको मात्रामा केही थप घट हुनसक्छ । त्यसैले जति पानी बाहिर गयो त्यति नै पानी पिउनु पर्छ । अर्थात २४ घण्टाको अवधीमा हामीले ५ लिटरको हाराहारीमा पानी पिउनुपर्छ । यदि केही रोग छैन अर्थात स्वस्थ व्यक्ति हो भने । यहाँ बुझ्नु जरुरी छ कि पाँच लिटर पानी पिउनु भनेको सादा पानी मात्रै पिउनु भन्ने चाहि होइन ।
पानीसंगै हामीले खाने खानेकुराबाट पनि पानीको मात्रा शरीरमा गइरहेको हुन्छ । दुध, जुस, चिया, तरकारी, दाल आदि शरीरका लागि आवश्यक पानीका स्रोतहरु हुन् । त्यसैले यी सबै गरेर दिनमा पाँच लिटर जति शरीरमा पानी पुग्नुपर्छ । तर याद गर्नुस् यो मात्रा स्वस्थ व्यक्तिका लागि हो । यदि व्यक्तिमा रोग छ भने त्यो रोगको प्रकृति अनुसार पानी कम खानुपर्ने पनि हुनसक्छ ।
अनुहारमा मुस्कान हुँदा आधा समस्याहरू आफै समाधान हुन्छ !
ओरल सेक्स रमाइलोसँगै जोखिमपनि !
आध्यात्मिक महिलाहरु धेरै सेक्सी हुने